Mawjadaha cufis jiifka: waa maxay, astaamaha, asalka iyo muhiimadda | Saadaasha Shabakadda
Waxaan ognahay in cilmiga fiisigiska uu leeyahay dhinacyo badan oo dadka aad ugu adag inay fahmaan. Mid ka mid ah dhinacyadaas ayaa ah hirarka cuf isjiidadka. Mawjadahaas waxaa saadaaliyay saynisyahanka Albert Einstein waxaana la ogaaday 100 sano ka dib saadintoodii. Waxay u taagan yihiin horumar xagga sayniska ah oo ku yimid aragtida Einstein ee ku-xirnaanshaha.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato mowjadaha cuf isjiidadka, astaamahooda iyo muhiimadda ay leeyihiin.
1 Waa maxay hirarka cuf isjiidadka
3 Astaamaha ugu waaweyn iyo asalka mowjadaha cuf isjiidadka
4 Ogaanshaha iyo muhiimadda
Waa maxay hirarka cuf isjiidadka
Waxaan ka hadleynaa matalaadda khalkhalka waqtiga-bannaan kaas oo ka dhasha jiritaanka jir dardar badan oo soo saaraya ballaarinta tamarta dhammaan jihooyinka xawaaraha iftiinka. Ifafaalaha mowjadaha cufis-jiidadka ayaa u oggolaanaya waqti-bannaan in la kala bixiyo iyadoon awoodin inuu ku noqdo xaaladdiisii ​​hore. Waxay sidoo kale abuurtaa khalkhal yar oo laga dareemi karo oo kaliya shaybaarada cilmiga ah ee horumarsan. Dhammaan khalkhalka cufis jiidku wuxuu awood u leeyahay inuu ku faafiyo xawaaraha iftiinka.
Badanaa waxaa la soo saaraa inta u dhexeysa laba ama in ka badan oo hay'ad bannaan ah oo soo saarta faafitaanka tamarta oo loo qaado dhammaan jihooyinka. Waa dhacdo sababa-waqtiga-ballaadhinta si ay ugu noqon karto xaaladdiisii ​​hore. Soo helida mowjadaha cuf isjiidashada ayaa kaalin muhiim ah ka qaatay barashada booska iyada oo loo marayo hirarkeeda. Tan awgeed, moodooyinka kale waa la soo jeedin karaa si loo fahmo habdhaqanka goobta iyo astaamaheeda oo dhan.
In kasta oo male-awaalkii ugu dambeeyay ee Albert Einstein ee aragtidiisa isu-ekaysiintu ahayd sharraxaadda hirarka cufis-jireed, haddana waxa la ogaaday qarni ka dib. Sidaas darteed, jiritaanka mowjadahaas cuf isjiidadka leh ee Einstein tilmaamay ayaa la xaqiijin karaa. Sida uu sheegay saynisyahankan jiritaanka mowjadaha noocan ahi waxay ka yimaaddeen soosaarid xagga xisaabta ah oo sheegaysa in aan shay ama calaamaddu ka dheereyn karin iftiinka.
Qarni ka dib 2014, kormeerka BICEP2 wuxuu ku dhawaaqay daahfurka iyo dabaqyada mowjadaha cuf isjiidadka ah ee la soo saaray xilligii ballaadhinta adduunku. Big Bang. Waxyar ka dib warkan waa la diidi karaa markii la arkay in tani aysan ahayn wax jira.
Sannad kadib saynisyahannadii tijaabada LIGO waxay awood u yeesheen inay soo ogaadaan mowjadahaas. Sidan oo kale, waxay hubiyeen ka qaybgalka inay ku dhawaaqaan warka. Sidaas darteed, In kasta oo daahfurku ahaa 2015, haddana waxay ku dhawaaqeen 2016.
Astaamaha ugu waaweyn iyo asalka mowjadaha cuf isjiidadka
Waxaan arki doonnaa waxa ugu sifooyinka badan ee matalaya ee mowjadaha cufis-jireed ka dhiga mid ka mid ah daah-furyada ugu muhiimsan ee cilmiga fiisigiska sannadihii la soo dhaafay. Kuwani waa carqaladeyn isbeddeleysa cabirka waqtiga-bannaan si ay ugu suurtagasho inay ballaadhiso iyadoon u oggolaan inay ku noqoto siddeedii hore. Sifada ugu weyn waa inay awoodaan inay ku faafiyaan xawaaraha iftiinka iyo jihooyinka oo dhan. Iyagu waa hirar is-bedbeddela oo waa la kala qaybin karaa. Tani waxay ka dhigan tahay inay sidoo kale leedahay shaqo magnet ah.
Mawjadahaasi waxay ku qaadi karaan tamar xawaare sare iyo meelo aad u fog. Waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah shakiga laga qabo mowjadaha cuf isjiidadka uu yahay in asalkiisa aan la go’aamin karin gebi ahaanba. Waxay ka muuqan karaan mowjaddo kaladuwan oo ku xiran xoogga mid kasta oo ka mid ah.
In kasta oo aysan si buuxda u caddayn, haddana waxa jira saynisyahanno badan oo isku dayaya inay dejiyaan sida hirarka cuf isjiidadka ahi u bilowdaan. Aan aragno waa maxay xaaladaha suurtagalka ah ee lagu abuuri karo:
Marka laba ama in ka badan oo meydad aad u tiro badani ay is dhexgalaan. Tiraabadani waa inay ahaadaan kuwo aad u weyn awoodda cuf isjiidadka si ay u dhaqan gasho.
Wax soo saarka ee meertada laba god madow.
Waxaa lagu abuuri karaa isku dhaca laba galaxis. Sida iska cad, tani waa wax aan maalin walba dhicin
Waxay asal ahaan ka soo unkami karaan markay meertada laba neutron isku soo beegmaan.
Ogaanshaha iyo muhiimadda
Aynu haddaba si kooban u falanqeyno sida saynisyahannada LIGO ay ugu suuragashay inay aqoonsadaan noocyada mowjadaha. Waan ognahay inay abuuraan khalkhal ku yimaada cabir yar yar oo ay kaliya ogaan karaan aaladaha farsamada casriga ah. Sidoo kale waa inaan maanka ku hayaa in qalabkani uu yahay mid jilicsan. Waxaa lagu yaqaan magaca interferometers. Waxay ka kooban yihiin nidaam godadyo dhawr kiiloomitir u jira oo loo qaabeeyey qaab L. Lasers-ka ayaa dhex mara godadkan dhaadheer ee dhererkoodu yahay kiiloomitirrada ka soo booda muraayadaha oo farageliya marka ay gudbayaan. Markay duufaan xoog lihi uu dhaco waxaa si fiican loo ogaan karaa cilad ku timaadda waqtiga bannaan. Samaynta xasilloonida ayaa dhacda inta u dhexeysa muraayadaha laga helo qalabka wax lagu dhejiyo.
Qalabka kale ee sidoo kale ogaan kara mowjadaha cufis-jiifka waa teleskop-yada raadiyaha. Telescopes-ka raadiyaha noocan oo kale ah ayaa iftiimin kara iftiinka ka soo baxa pulsars. Muhiimadda ay leedahay in la ogaado noocyada mowjadaha noocan ah ayaa ah waxa aadanaha u oggolaanaya in uu si wanaagsan u baaro adduunka. Waana ku mahadsan tahay mawjadahaas in si fiican loo maqli karo gariirka ku sii fidaya waqtiga-waqtiga. Daahfurka mowjadahaas waxay suurtagelisay in la fahmo in koonku isbeddelayo oo dhammaan cilladaha ay ballaadhiyaan oo ay ku foorarsanayaan dhammaan meeraha iyaga oo wata qaab mowjado ah.
Waa in la ogaadaa in hirarka cuf isweydaarsiga ay sameysmayaan, waa in la abuuraa habab rabshad sida isku dhaca godadka madow. Waxay ku mahadsan tahay barashada mowjadahaas oo macluumaad laga heli karo in dhacdooyinkan iyo musiibada ka dhacda cosmos-ka. Dhammaan ifafaalooyinku waxay kaa caawin karaan fahamka iyo sharraxaadda sharciyo badan oo aasaasi ah oo ku saabsan cilmiga fiisigiska. Tan awgeed, tiro badan oo macluumaad ah ayaa la bixin karaa oo ku saabsan booska, asalkiisa iyo sida ay xiddiguhu u xumaadaan ama u baaba'aan. Dhamaan macluumaadkan sidoo kale waxaa loo soo qaatay si wax badan looga barto godadka madow. Tusaale mawjadaha cuf isjiidadka Waxaa laga helaa qaraxa xiddigta, isku dhaca laba meteorites ama marka godad madow la sameeyo. Waxaa sidoo kale laga heli karaa qaraxa supernova.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto mowjadaha cuf-jiifka iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Hirarka cufis jiifka